I-china komatsu track link assy manufacturer eChina abakhiqizi nabaphakeli | Jinjia
Izingxenye Zokuhamba Ngaphansi Kwesisu
Landelela Isixhumanisi se-Assy
Amasiko Wenkampani Nomlando
Komatsu track link assy nomkhiqizi eChina
Excavator Yangaphakathi Gear Swing Amabombo
Izingxenye ze-bulldozer undercarriage
Kuhle-Quality dozer othwala roller
I-Caterpillar Crawler Excavator ngaphansi kwesithuthi IDLER
Ama-Sprockets namaSegment abembayo ne-dozer kanye ...
I-China track roller ye-KOMATSU dozer undercarriage
Landelela Izicathulo Zethrekhi Yokukhasa
Sinezinhlobonhlobo eziningi zethrekhi yesilingo lapho iphimbo isukela ku-88mm kuye ku-226mm, ifanele zonke izinhlobo ze-excavator, i-bulldozer, imishini yezolimo nemishini ekhethekile.Ukwakhiwa okuqinile kwenza isixhumanisi sethrekhi sigqoke isikhathi eside impilo nezimpawu zokumelana nengcindezi. Ubuso kanye nokuthuthuka kwesixhumanisi, iphini nesihlahla bekuqedwe ngezinga eliphakeme kunempilo egqoke kanzima.
Zonke izingxenye zethu zisekelwa ngewaranti engcono kakhulu embonini futhi zivivinywa isikhathi emkhakheni. Umgomo wethu ukuhlinzeka ngezindleko eziphansi kakhulu zokusebenza ngehora ngalinye okungenzeka kumakhasimende ethu.
1. Amaketanga wethrekhi owomile, amaketanga wethrekhi evaliwe futhi agcotshisiwe, amaketanga agcotshisiwe wezinhlelo zokusebenza eziphezulu.
2.Yenziwe ngensimbi ekhethekile kanye nokushisa okukhulu okuphathwe impilo eyakhiwe ngokuphelele ngaphansi kwezimo zokusebenza ezimbi kakhulu.
3. Onke amaketanga ethu akhelwe ngokukhethekile ukuqina kwezikhonkwane nama-bushings. Ukuphazanyiswa okuncane / okulingene kokulingana kokubekezelelana phakathi kwezikhonkwane, ama-bushings, nezixhumanisi kugcinwa ngokuzenzakalela ngemininingwane yamandla wokucindezela wamamin / max. Le nqubo inciphisa ukuphuka kwesixhumanisi kanye ne-pin / bushing drifting. Siphinde futhi sinikele ngamaketanga anomthwalo osindayo anama-bushings amelana nokugqoka ngokweqile ngempilo yensizakalo ephezulu ezinhlelweni ezinokulimala okukhulu.
4. Izinto: 35MnB noma 40Mn2.
5.Ikhono Lokukhiqiza: 500pcs / Inyanga, nefektri yethu yokwakha kusukela ngo-2012.
Senza konke ukwakhiwa kwethu, ukwelashwa ngemishini nokushisa ukushisa ezindaweni zethu, okusinikeza ukulawula ikhwalithi ngaphezulu kwayo yonke inqubo yokukhiqiza yamaketanga ethu wethrekhi.
7. Umjikelezo wokukhiqiza: ukuhleleka okujwayelekile kungaphakathi kwezinsuku eziyi-10; ama-oda amakhulu angadinga izinsuku eziyi-15-35.
Izixhumanisi ezikhululekile, isixhumanisi sethrekhi, i-track link assy, ​​ithrekhi ye-track assy / ithrekhi, konke kuyatholakala.
Langaphambilini I-China track roller ye-KOMATSU dozer undercarriage
Olandelayo: Ama-Sprockets namaSegment abembayo ne-dozer ne-crane
Excavator Track Isixhumanisi Assy
Izingxenye zeCrawler Crane Undercarriage
izingxenye ezisele for ukwakhiwa imishini undercar ...
LS118 ngokwezifiso Track Roller Izingxenye yenqola 60T Fo ...
Cha. 20 Shangtang Changtai Shudou Licheng Quanzhou Fujian.